Banaanbax looga soo horjeedo Madaxweyne Farmaajo oo ka bilaawday Muqdisho+Sawirro - Awdinle Online
Banaanbax looga soo horjeedo Madaxweyne Farmaajo oo ka bilaawday Muqdisho+Sawirro
Qaar kamid ah degmooyinka dhinaca Waqooyi ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilaawday banaanbax looga soo horjeedo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Bannaan baxa ayaa waxaa la sheegay ay soo qaban qaabiyeen Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha, iyada oo la arkayaa dad tiro yar oo watay boorar ay ku qoran yihiin, doorasho boob ah doonimeyno iyo Erayo kale.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Midowga Musharaxiinta ayaa sheegaya in bannaan baxa uu hordhac u yahay bannaan baxyo xiriir ah oo maalmaha soo socda ka dhigi doonaan Muqdisho, kaasoo looga soo horjeedo Maamulka Madaxweyne Farmaajo iyo isku dayga uu ku doonayo in doorasho hal dhinac ah uu ku qabto.
Banaanbaxaan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli inta badan Maanta wadooyinka Muqdisho ay xireen Ciidamada Dowladda Soomaaliya sidoo kalena uu tiyaatarka Qaranka ka socdo dibadbax lagu taageerayo Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleDowladda Turkiga oo Ciidamo horleh u tababareysa Soomaaliya+Sawirro
Next articleDagaal ka dhacay Xaafad ka tirsan Muqdisho